Bit By Bit - agba nwere - 4.3 abụọ akụkụ nke nnwale: lab-ubi na analọg-digital
Ụlọ nyocha nwere na-enye akara, ubi nwere na-enye nsiridi, na dijitalụ ubi nwere ikpokọta akara na nsiridi na ọnụ ọgụgụ.
Nwere-abịa dị iche iche shapes na nha. Ma, n'agbanyeghị ndịrịta iche ndị a, a chọpụtala na ọ na-enye aka na-ahazi nwere tinyere a continuum n'etiti ụlọ nyocha nwere na ubi nwere. Ugbu a, Otú ọ dị, ndị nnyocha kwesịkwara hazie nwere tinyere a continuum n'etiti analọg nwere na dijitalụ nwere. A abụọ akụkụ imewe ohere ga-enyere gị ịghọta eme nke oma na adịghị ike nke dị iche iche na-eru nso na-atụ aro ebe nke kasị ukwuu ohere (ọgụgụ 4.1).
Ọgụgụ 4.1: schematic nke imewe ohere maka nwere. N'oge gara aga, nwere iche iche, tinyere ndị lab-ubi akụkụ. Ugbu a, ha na-ike ịdị iche iche na analọg-digital akụkụ. N'uche nke m, na ebe nke kasị ukwuu ohere dị digital ubi nwere.
N'oge gara aga, isi n'ụzọ na-eme nnyocha haziri nwere bụ n'okporo lab-ubi akụkụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime nnwale na-elekọta mmadụ na sayensị na-lab nwere ebe Undergraduate ụmụ akwụkwọ ịrụ iju aga-eme na a ụlọ nyocha maka N'ezie akwụmụgwọ. Nke a na ụdị nnwale okpon akan nnyocha na akparamaagwa n'ihi na ọ na-enyere-eme nnyocha iji mepụta ihe aha agwọ ọrịa ndị e mere iji nwalee ihe aha chepụtara banyere elekọta mmadụ omume. N'ihi na nsogbu ụfọdụ, Otú ọ dị, ihe na-adị a bit dị iche banyere eru siri ike banyere ihe omume ụmụ mmadụ si otú ahụ pụrụ iche na ndị mmadụ na-arụ dị otú ahụ pụrụ iche na ihe aga-eme na otú ahụ pụrụ iche ọnọdụ. Nsogbu ndị a meworo ka ike a gbasoo echiche ubi nwere. Ubi nwere ikpokọta ike imewe nke enweghị usoro akara nwere na ihe nnọchiteanya iche iche nke sonyere, n'ịrụ ndị ọzọ ọsọ aga-eme, na ọzọ eke ntọala.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eche ụlọ nyocha na ubi nwere dị ka mpi ụzọ, ọ kasị mma na-eche echiche nke ha dị ka ihe na ụzọ dị iche iche na-eme nke oma na adịghị ike. Dị ka ihe atụ, Correll, Benard, and Paik (2007) ji ma a lab nnwale na a ubi nnwale ịnwa ịmata ya ka isi iyi nke "nne ya pụta." Na United States, ndị nne irite obere ego karịa ịmụ nwa inyom, ọbụna mgbe atụnyere ndị inyom na ndị yiri nkà na-arụ ọrụ yiri ọrụ. E nwere ọtụtụ ekwe omume nkọwa maka nke a nlereanya, na otu onye bụ na-ewe mmadụ n'ọrụ na-abụchaghị eziokwu megide nne. (Akpali mmasị, ndị na-abụghị na o yiri ka ezi n'ihi na nna-: ha na-aka irite ihe karịrị tụnyere n'amụtaghị nwa nwoke). Iji na-amata na o kwere omume Bias megide nne, Correll na ndị ọrụ ibe efehe abụọ nwere: onye ke ụlọ nyocha na onye na ubi.
Akpa, na a ụlọ nyocha nnwale Correll na ndị ọrụ ibe gwara sonyere, bụ ndị na mahadum undergraduates, na a California dabeere na mmalite-elu nkwukọrịta ụlọ ọrụ na-eduzi ọrụ search maka a onye na-edu ya ọhụrụ East Coast ahịa ngalaba. Ụmụ akwụkwọ, a gwara na ụlọ ọrụ chọrọ enyemaka ha na igo usoro na a gwara ha ka nyochaa malitegharịa nke ọtụtụ nwere oghere mmeri na-edebe ihe ndị na-aga ime on a ọnụ ọgụgụ nke akụkụ dị ka ha na ọgụgụ isi, ịhụnanya, na nkwa-arụ ọrụ. Ọzọkwa, ụmụ akwụkwọ ahụ jụrụ ma ọ bụrụ na ha ga-ikwu-ego ocho oru na ihe ha ga-ikwu dị ka a na-amalite ụgwọ. Unbeknownst ka ụmụ akwụkwọ, Otú ọ dị, ndị malitegharịa e kpọmkwem wuru na-yiri ma e wezụga n'ihi otu ihe: ụfọdụ n'ime malitegharịa gbara nne (site depụtara itinye aka na a nne na nna-nkụzi mkpakọrịta) na ụfọdụ emeghị otú ahụ. Correll chọpụtara na ụmụ akwụkwọ na-erughị kwesiri ka nwere ike ikwu ego ndị nne na-edoziri ha ala amalite ụgwọ. Ọzọkwa, site a mgbakọ na mwepụ analysis nke ma ndị ratings na igo-metụtara mkpebi, Correll chọpụtara na nne ọghọm e n'ụzọ dị ukwuu kọwara site n'eziokwu ka ndị nne na e gosiri ala na okwu nke iru eru na nkwa. Yabụ, Correll rụrụ ụka na àgwà ndị a bụ usoro site na nke nne na-enweghị ka. N'ihi ya, a lab nnwale kwere Correll na ndị ọrụ ibe tụọ a causal mmetụta na-enye a ga-ekwe omume nkowa maka nke ahụ.
N'ezie, otu onye nwere ike inwe obi abụọ banyere n'ikwubi dum US ọrụ ahịa nke dabeere na mkpebi nke a narị ole na ole undergraduates ndị eleghị anya mgbe nwere a zuru oge ọrụ, ka naanị goro ndị mmadụ. Ya mere, Correll na ibe-arụkwa a arụkọ ubi nnwale. The eme nnyocha zara ọtụtụ narị advertised ọrụ oghere site n'izite na adịgboroja cover akwụkwọ ozi ma malitegharịa. Yiri ihe gosiri na undergraduates, ụfọdụ malitegharịa gbara nne na ụfọdụ emeghị otú ahụ. Correll na ndị ọrụ ibe chọpụtara na ndị nne nọ obere yiri ka a na-akpọ azụ maka ajụjụ ọnụ karịa dokwara ruru eru n'amụtaghị nwa nwanyi. Ndị ọzọ okwu, ezigbo mmadụ n'ọrụ na-eme ka ndị dị mkpebi na a eke ọnọdụ kpara àgwà dị nnọọ ka undergraduates. Ka ha na-eme yiri mkpebi maka otu ihe ahụ? O di nwute na, anyị na-amaghị. The eme nnyocha enweghịkwa ike ịjụ ndị mmadụ n'ọrụ na-edebe ihe ndị na-aga ime ma ọ bụ kọwaa ha mkpebi.
A ụzọ nke nwere ekpughe ọtụtụ ihe banyere ụlọ nyocha na ubi nwere n'ozuzu. Ụlọ nyocha nwere na-enye na-eme nnyocha nso ngụkọta akara nke gburugburu ebe obibi nke ndị keere òkè na-eme mkpebi. Ya mere, ihe atụ, ke ụlọ nyocha nnwale, Correll nwee ike iji hụ na niile malitegharịa e-agụ na a jụụ ọnọdụ; na ubi nnwale, ụfọdụ n'ime malitegharịa nwere ike ọ gaghị Ọbụna e agụ. Ọzọkwa, n'ihi na ndị na-lab ọnọdụ mara na ha na-amụ, na-eme nnyocha na-abụkarị ihe ike na-anakọta ọzọ data nwere ike inyere ha aka ịghọta ihe mere sonyere na-eme mkpebi ha. Dị ka ihe atụ, Correll jụrụ ndị na-lab nnwale na-edebe ihe ndị na-aga ime on dị iche iche akụkụ. Nke a na ụdị usoro data nwere ike inyere aka na-eme nnyocha ịghọta usoro n'azụ iche dị na otú sonyere emeso ndị malitegharịa.
N'aka nke ọzọ, ndị a kpọmkwem otu ihe ahụ e ji mara na m dị nnọọ kọwara dị ka uru na-mgbe ụfọdụ weere na ọghọm. Researchers na-ahọrọ ubi nwere arụ ụka na sonyere na lab nwere ike ime ihe nke ukwuu dị iche iche mgbe ha na-anya hụrụ. Dị ka ihe atụ, ke ụlọ nyocha nnwale sonyere nwere ike guessed ihe mgbaru ọsọ nke nnyocha na gbanwere àgwà ha ka ọ ghara iyi ka abụchaghị eziokwu. Ọzọkwa, na-eme nnyocha na-ahọrọ ubi nwere ndị pụrụ ikwu na obere iche on malitegharịa nwere ike na-eguzo na a nnọọ ọcha, akpali mmasị lab gburugburu ebe obibi, ma si otú ụlọ nyocha nnwale ga n'elu-ekwu na mmetụta nke ịbụ nne on ezigbo igo mkpebi. N'ikpeazụ, ọtụtụ na-akwado echiche nke ubi nwere akatọ ụlọ nyocha nwere adabere n'ebe dị egwu sonyere: tumadi ụmụ akwụkwọ si Western, gụrụ akwụkwọ, mepere emepe, Rich, na Democratic mba (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010) . The nwere site Correll na ibe (2007) mee ihe atụ nke abụọ ókè na lab-ubi continuum. Na n'etiti abụọ ndị a ókè e nwere a dịgasị iche iche nke ngwakọ aghụghọ gụnyere eru nso dị ka na-eweta na-abụghị ụmụ akwụkwọ n'ime a ụlọ nyocha ma ọ bụ na-aga n'ọhịa, ma ka na-enwe sonyere ịrụ pụrụ iche ozi.
Na mgbakwunye na lab-ubi akụkụ ahụ e kee ihe ndị gara aga, dijitalụ afọ pụtara na-eme nnyocha ugbu a nwere a abụọ isi akụkụ tinyere nke nwere ike ịdị iche iche: analọg-digital. Dị nnọọ ka e nwere dị ọcha lab nwere, dị ọcha ubi nwere, na a dịgasị iche iche nke adọ ụdị ụfọdụ n'etiti, e nwere dị ọcha analọg nwere, dị ọcha dijitalụ nwere, na a dịgasị iche iche nke adọ ụdị ụfọdụ. Ọ bụ tricky na-enye n'ụzọ ziri definition nke a akụkụ, ma a bara uru na-arụ ọrụ definition bụ na n'ụzọ zuru ezu dijitalụ nwere ndị nwere na-eme ka ojiji nke dijitalụ akụrụngwa na-n'oru sonyere, randomize,-anapụta agwọ ọrịa, ma tụọ ga esi. Dị ka ihe atụ, Restivo na van de Rijt si (2012) na-amụ barnstars na Wikipedia bụ a n'ụzọ zuru ezu dijitalụ nnwale n'ihi na ọ na-eji dijitalụ usoro maka niile anọ nke ndị a. N'otu aka ahụ n'ụzọ zuru ezu analọg nwere ndị nwere na-adịghị eme ka ojiji nke dijitalụ akụrụngwa maka ihe ọ bụla nke a ka ukwu anọ. Ọtụtụ n'ime kpochapụwo nwere na nkà mmụta banyere akparamàgwà na-analọg nwere. Na n'etiti abụọ ndị a ókè e nwere na-ezughị ezu dijitalụ nwere na-eji a Nchikota analọg na dijitalụ usoro maka ihe anọ e.
Critically, ohere na-agba ọsọ digital nwere abụghị naanị online. Researchers nwere ike na-agba ọsọ na-ezughị ezu dijitalụ nwere site na iji dijitalụ ngwaọrụ na ụwa nkịtị iji napụta agwọ ọrịa ma ọ bụ tụọ ga esi. Dị ka ihe atụ, na-eme nnyocha nwere ike iji smart phones napụta agwọ ọrịa ma ọ bụ sensọ na wuru gburugburu ebe obibi tụọ ga esi. N'ezie, dị ka anyị ga-ahụ n'isi akwụkwọ a, na-eme nnyocha na-ama-eji home ike mita tụọ ga esi na nnwale banyere ọha norms na oriri ike metụtara 8.5 nde ezinụlọ bịara (Allcott 2015) . Dị ka dijitalụ ngwaọrụ na-esiwanye ike nime ndu ndi na sensọ abụ nke a ike n'ime wuru gburugburu ebe obibi, ndị a ohere na-agba ọsọ na-ezughị ezu dijitalụ nwere na ụwa nkịtị ga-amụba n'ike n'ike. Yabụ, digital nwere abụghị naanị online nwere.
Digital usoro ike ọhụrụ ohere maka nwere n'ebe nile tinyere lab-ubi continuum. Na dị ọcha lab nwere, n'ihi na ihe atụ, na-eme nnyocha nwere ike iji dijitalụ usoro maka finer-amata ọtụtụ sonyere 'omume; otu ihe atụ nke ụdị mma mmesho bụ anya emeele ngwá nke na-enye kpọmkwem na-aga n'ihu jikoro nke anya na ọnọdụ. The dijitalụ afọ na-emepụta na o na-agba ọsọ lab-dị ka nwere online. Dị ka ihe atụ, ndị nchọpụta ngwa ngwa nakweere Amazon Mechanical Turk (MTurk) to n'oru sonyere maka online nwere (ọgụgụ 4.2). MTurk ọkụ "ewe mmadụ n'ọrụ" bụ ndị nwere ihe aga-eme na mkpa ga-agwụ agwụ na "ọrụ" ndị chọrọ iji wuchaa ọrụ ndị ahụ maka ego. N'adịghị ka omenala oru ahịa, Otú ọ dị, ihe aga-eme aka na-emekarị nanị achọ a nkeji ole na ole iji wuchaa na dum na mmekọrịta dị n'etiti na-arụrụ ọrụ na ọrụ bụ mebere. N'ihi na MTurk mimics akụkụ nke omenala lab nwere-akwụ ụgwọ ndị mezue ihe aga-eme na ha agaghị eme maka free-ọ na-adịkarị ruru eru maka ụdị ụfọdụ nke nwere. N'ụzọ bụ isi, MTurk kere akụrụngwa maka ijikwa a ọdọ mmiri nke ndị keere òkè-mmadụ n'ọrụ na-akwụ ụgwọ ndị mmadụ-ma ndị nchọpụta iwere uru nke na akụrụngwa nke inyocha ihe mgbe niile dị ọdọ mmiri nke ndị keere òkè.
Ọgụgụ 4.2: akwụkwọ e bipụtara na iji data site Amazon Mechanical Turk (MTurk) (Bohannon 2016) . MTurk na ndị ọzọ na online ọrụ na ahịa na-enye na-eme nnyocha a dị ntụsara ahụ isi n'oru sonyere maka nwere.
Digital nwere ike ọbụna karịa ohere ubi-dị ka nnwale. Digital ubi nwere ike na-enye uko akara na usoro data ịghọta pụrụ isi nwee njikọ (dị ka ụlọ nyocha nwere) na ihe iche iche sonyere eme n'ezie mkpebi na a eke gburugburu ebe obibi (dị ka ubi nwere). Tụkwasị na nke a Nchikota ọma e ji mara nke mbụ nwere, digital ubi nwere na-enye atọ ohere bụ ndị siri na analọg lab na ubi nwere.
Akpa, ebe ihe ka ọtụtụ analọg lab na ubi nwere nwere ọtụtụ narị sonyere, digital ubi nwere ike nwee ọtụtụ ndị sonyere. Mgbanwe a na ọnụ ọgụgụ bụ n'ihi na ụfọdụ digital nwere ike na-emepụta data na efu variable na-eri. Ya bụ, otu ugboro-eme nnyocha kere onye ibuo akụrụngwa, ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke ndị keere òkè na a na-adịghị amụba na-eri. Amụba ka ọnụ ọgụgụ nke ndị keere òkè site a na-akpata nke 100 ma ọ bụ karịa a abụghị nnọọ quantitative mgbanwe, ọ bụ a qualitative mgbanwe, n'ihi na ọ na-enyere ndị nnyocha na-amụta dị iche iche ihe si nwere (eg, heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta) na-agba ọsọ kpamkpam dị iche iche ibuo aghụghọ ( eg, nnukwu ìgwè nwere). A dị nnọọ mkpa, Aga m alaghachi ya kwupụta ọgwụgwụ nke isi mgbe m na-enye ndụmọdụ banyere eke digital nwere.
Nke abụọ, ebe ihe ka ọtụtụ analọg lab na ubi nwere emeso sonyere dị ka indistinguishable wijetị, digital ubi nwere na-eji ihe ọmụma banyere sonyere na imewe na analysis nkebi nke nnyocha. A ndabere ọmụma, nke a na-akpọ tupu ọgwụgwọ ọmụma, bụ mgbe dị na dijitalụ nwere n'ihi na ha na-ebe ke n'ụzọ zuru ezu tụrụ gburugburu. Dị ka ihe atụ, a na-eme nchọpụta na Facebook nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ tupu ọgwụgwọ ọmụma karịa a na-eme nchọpụta emebe a ọkọlọtọ lab-enwe undergraduates. Nke a tupu ọgwụgwọ ọmụma enyere-eme nnyocha ịkwaga n'ofè n'imeso sonyere dị ka indistinguishable wijetị. More kpọmkwem, tupu ọgwụgwọ ọmụma enyere ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma ibuo aghụghọ-dị ka igbochi (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) na ezubere iche maka mbanye nke ndị keere òkè (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) a kpọkwara ihe mmụta analysis-dị ka ọnu nke heterogeneity nke ọgwụgwọ utịp (Athey and Imbens 2016a) na covariate mgbanwe maka mma nkenke (Bloniarz et al. 2016) .
Nke atọ, ebe ọtụtụ analọg lab na ubi nwere anapụta agwọ ọrịa na ụfọdụ ga esi na a dịtụ abịakọrọ ego nke oge, ụfọdụ digital ubi nwere abuana agwọ ọrịa na ike ga-anapụta karịrị oge na mmetụta nwekwara ike tụrụ ihe karịrị oge. Dị ka ihe atụ, Restivo na van de Rijt si Nnwale ahụ pụta tụrụ kwa ụbọchị maka 90 ụbọchị, na otu onye nke nwere m agwa gị banyere mgbe e mesịrị na isi (Ferraro, Miranda, and Price 2011) tracks ga esi n'elu 3 afọ na ihu ọma ọ bụla -eri. Atọ ndị a ohere-size, tupu ọgwụgwọ ọmụma, na longitudinal ọgwụgwọ na ya pụta data-na-kasị nkịtị mgbe nwere na-agba ọsọ n'elu mgbe niile-na nha usoro (lee Isi nke 2 n'ihi na ihe on mgbe niile-on mmesho usoro).
Mgbe digital ubi nwere na-enye ọtụtụ ohere, ha na-ịkekọrịta ụfọdụ adịghị ike na ma analọg lab na ubi nwere. Dị ka ihe atụ, nwere ike ga-eji na-amụ gara aga, ha nwere ike na-eme atụmatụ na mmetụta nke ọgwụgwọ na ike ga-mma. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na nnwale ndị doro anya bara uru na-eduzi iwu, kpọmkwem nduzi ha pụrụ inye bụ dịtụ mmachi n'ihi nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka gburugburu ebe obibi na nduzi, nnabata nsogbu, na ịha mmetụta (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) . N'ikpeazụ, digital ubi nwere emesi usoro ziri ezi nchegbu kere ubi nwere. Akwado echiche nke ubi nwere bịaghị gwawa ha nwere ikike unobtrusively na-enweghị usoro itinye onu n'ime ndị dị kpebiri ka e mee ọtụtụ nde mmadụ. Atụmatụ ndị a na-enye ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị uru, ma ha nwekwara ike ime ka ubi nwere ethically mgbagwoju (-eche banyere ya dị ka na-eme nnyocha n'imeso ndị mmadụ dị ka "lab oke" on a oke ọnụ ọgụgụ). Ọzọkwa, na mgbakwunye na o kwere omume Harms ka sonyere, digital ubi nwere, n'ihi na ha na ọnụ ọgụgụ, nwekwara ike welie nchegbu banyere emeghasịkwa nke na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ na usoro (eg, nchegbu banyere ime Wikipedia ụgwọ ọrụ usoro ma ọ bụrụ na Restivo na van der Rijt nyere ọtụtụ barnstars) .